Ariana Grande iyo Saaxiibka Saaxiibka ah ee Sean Reunite 4 Sano Ka Dib Kaddib - Lacagta Teles
ACCUEIL » MUSIC • DADKA & LIFESTYLE »Ariana Grande iyo Saaxiibka Saaxiibka ah ee Big Sean Reunite 4 Sano Ka Dib Kaddib
Waad mahadsantihiin, xiga? Si dhakhso ah u ha!
Ariana Grande waxay kor u qaadday sunnihii qaar asbuucan markii ay sawir la qaadatay cid kale oo aan ahayn tan hore caan u ahayd, Big Sean. Sida laga soo xigtay ilo wareed, Grammy-winning winstress ayaa la xirxiray Arbacadii oo fadhiya kursiga hore ee leh eeyga ee gacmihiisa halka halka ragga ah 30-sano jir ah ka danbeeya kursiga darawalka. Labada kooxood waxay wadaagaan stüdyo duubista Los Angeles, halkaasoo Sean uu soo bandhigay qaab ciyaareedka ka dib dhowr saacadood.
Ma cadda waxa dhabta ah ee la isweydiiyay wadiiqada, inkasta oo ay u muuqato in foomkani wali yahay mid wanaagsan. Sida taageerayaasha si fiican u yaqaan, labada waxaa loogu yeeraa inay joojiso dib ugu soo noqoshada April 2015 ka dib markii ku dhawaad ​​sagaal bilood oo shukaansi ah. "Waxay labaduba isku taxalujiyaan midba midka kale waxayna joogaan saaxiibo isku dhow. Waxaan si naxariis leh u codsaneynaa in warbaahintu ay ixtiraamaan rabitaankooda gaarka ah ee arrintan, "bayaanka wadajirka ah ayaa akhriyay sannado ka hor.
Ariana Grande & Pete Davidson: Rajo wanaagsan
Waqtigaa, ilaha ayaa u sheegay E! News jadwalka mashquulka ah waxaa lagu eedeyn lahaa. "Waxay go'aansadeen in ay wadaagaan jidadkooda," ayaa laga soo xigtay ilwareedka.
Ilaha labaad waxay ku celceliyeen in labadooduba ay ahaayeen kuwo la aqbalo.
"Ariana iyo Big Sean waxay lahaayeen xiriir weyn, waxayna yihiin saaxiibo aad uwanaagsan, waxayna ku sii jiri doonaan qof kasta oo kale" ayuu hadalkiisa ku daray. "Ma ahan mid fudud, laakiin labadoodaba way og yihiin inay sii adkaan doonto bilaha soo socda. Tani dhab ahaantii way adag tahay, laakiin waxay u maleynayeen in ay ka fiicnaan lahayd, markaa ma jiro dhiig xun oo u dhexeeya iyaga. "
Sannadkan Hore ee sanadkan Gabdhaha Mean- qayb ka mid ah filimkeeda muusikada loogu talagalay "mahadsanid, ku xigta," taas oo ay magaceeda hoos u dhigtay xiddigaha kale.
"Fikrad ayaan ku dhamaan lahaa Sean / laakiin ma uusan aheyn ciyaar," ayay ku tidhi hadalkiisa.
"Waxaan u direy [heesta] Sean waana jeclaa. Wuxuu jecel yahay, "Weyn ayaa lagu soo wariyay wareysi ku saabsan Zach Sang Show. "Waxay ahayd mid aad u xiiso badan. Wuxuu ahaa sida, 'D-n, waxaan ahay kan koowaad, huh?' Anigu waxaan jeclaan lahaa, 'waxaan u maleynayaa, waad ogtahay, waan u baxay si nasiib ah.' Waxa uu ahaa mid aad u taageera, wuu jecel yahay. "
Waxay kaloo ku jirtaa qoraal yar oo ku saabsan isaga oo ku jira "buug gubasho," qorista "aad u qurux badan sidaa daraadeed" waxa ay ahayd bog uu ku qotomiyey isaga oo raacaya dareenka ugu dambeeya sida, "(Wali wali heli kartaa)."
Cardi B iyo Bruno Mars Iskuday Kuleylka "Fadlan" Music Video